Soo dejisan GIMP 2.8.18 – Vessoft
Soo dejisan GIMP
GIMP – software ah oo awood leh si ay u abuuraan iyo edit sanamyadii. software waxay leedahay set weyn ee qalabka u saamaxaya in la abuuro, edit iyo isku sanamyadii garaafyada ee ku dhow kasta kakanaanta heer xirfadeed. GIMP taageertaa qaabab badan oo kala duwan image oo kuu ogolaanaya in aad la raster ama dulinka naqshadeynta shaqeeyaan. software The la layers, waji, filtarrada iyo hababka kala duwan ee ka shaqeeya qasayso. GIMP gubtay khayraadka nidaamka ugu yar oo uu leeyahay interface ah dareen leh.
Taageerada qaabab kala duwan image
tiro badan oo qalab loogu talagalay rinjiyeynta
set A of saamaynta kala duwan
Badalidda qaabab image
GIMP Software la xiriira: